‘कोइ चैं भने जहाजमा सरर, कोइ चैं भने पसिना तरर, हाम्रो नेपालमा — News of The World
‘कोइ चैं भने जहाजमा सरर, कोइ चैं भने पसिना तरर, हाम्रो नेपालमा
संसार न्यूज संवाददातामाघ ४, २०७३
‘झम्पल ल्याऊ झम्पल !’ ढुङ्गोमाथि चढ्दाचढ्दै चर्काे स्वरमा करायो धौले कान्छो ।
‘होसले पस् है कान्छा !’ कराई लच्छी ।
‘नकरा ! नकरा !’ टुप्पोमै पुगिसकेको थियो कान्छो ।
ठिङ्ग उभियो कान्छो । हे¥यो सिधै तल ।
दमाई गाउँमा पत्रैपत्र ढुङ्गा खापिएकाजस्ता कान्ले फोक्टाहरु मात्रै छन् । फोक्टाभन्दा कान्लाहरु अग्ला छन् । हल गोरु छिर्नलाई हम्मेहम्मे पर्छ । वस्तीदेखि दायँपट्टि ऊ फाँटिलो खेत । खेत उनै नन्दकुमार अध्यक्षको हो । पाँच घरमध्ये चार घर दमाईहरुले अधियाँ कमाउँछन् । खेतकै गरामा दमाई वस्तीका घरहरुभन्दा अग्ला जोडी कुन्यु छन् । त्यही बेला करायो हवाइजहाज । हे¥यो आकाशतिर । जाँदै थियो पूर्वतिर वेगिएर । झण्डै धर्मरायो कान्छो । दह«ो गरी टेक्यो पैतालाले । कम्मरमा हात राख्यो । मुन्टो हल्लाउँदै सुसेल्न थाल्यो उही भाका –
‘कोइ चैं भने जहाजमा सरर
कोइ चैं भने पसिना तरर, हाम्रो नेपालमा ।’
‘अझ हेर न,’ मन थाम्न सकिन लच्छीले । हेरी ढुङ्गोको टुप्पोतिर । खाकीको हाफ पेन्ट, हङ्ग्रङ्ग परेको । पसिना र धुलोले बराबर मैलिएको । उस्तै मैलो कमिज । कुमकुममा फाटेको । अनुहारै ढाक्ने दाह«ीजुँगा । जिङ्रिङ्ग ठडिएका कपालहरु । घामले डढेर कालो भइसकेको हातखुट्टाको छाला । दुःखको कुनै पहाड थियो कान्छो । मन चसक्क दुख्यो । मायाले भरिएर उसैउसै फतक्क भई लच्छी । भनी, ‘होस गर् भन्दै छु है । तान्ला सेंहेंले ।’
‘नकरा न !’ कान्छो ब्लाउन र खरानी रङ्गको धुस्रैफुस्रै लुङ्गी लगाएकी । कपालमा स्काप बाँधेकी । गोरो वर्णलाई घामले खाँदै लगेको अनुहार । फर्फराउँदा आँखीभौं तर टिल्टिलाउँदा आँखा । सप्लेटी ओठ तर फुङ्ग उड्दै गरेका । हा–हाकार मच्चियो क्षणमै । तर, तुरुन्तै जाग्यो दम्भिलो मान्छे । रवाफमा भन्यो कान्छोले, ‘यै ढुङ्गोले ज्यान खाँदैन मेरो । बाँच्छु अझै दुई बीस ।’
‘गैती पन् बजाऊ है तस्का बाजेलाई !’ देउगण चढ्यो चार पाउ टेक्दै । त्यहीबेला चल्यो एक सर्काे वतास । फर्फरायो त्यसको कमिज । फर्फरायो–गाउँभरिका ठूलाबडा भनाउँदाहरुको आँगनमा फर्फराइरहेको पार्टीको झण्डाजस्तो । फर्फरायो –ध्वार्रध्वार्र गरेर । दउगण पुग्यो टुप्पोमा । सुसेल्यो त्यसले, ‘सुइ¥य !’
‘होस गर है साथी हो !’ रामे माइलाले एक बेल्चा गेगर फाले । मसिना आँखा छन् तिनका । बारम्बार झिमिकझिमिक पारिरहन्छन् । फेरि झिमिकझिमिक गरे । पुछे पसिना दौराको फेरले । भने, ‘ढुङ्गा नाथेको भर हुँदैन ।’
‘तल बस्नेले चैं अडेसो हेर है !’ खासाको ट्राउजर थोरै उँभो सुक्र्याे सोमकुमारले । पछ्यायो देउगणलाई । भन्यो, ‘ के हो के हो !’
‘त्यै त,’ पूर्ण डोटेलले धुलोसरिका हात टक्टकाए । बायाँ कानमाथि उध्रिएको ढाकाटोपी फुकाले । कन्याए कपाल । फुर्रर उड्दै खसे चायाँका धुलाहरु । कालो अस्कोटको कुमभरी अघि नै थिए उसै धुलामैला । थपियो चायाँ । देखियो सेताम्मे हिउँ परेको पहाडजस्तो । भने पूर्ण डोटेलले, ‘दशा भन्ने बाजा बजाउँदै आउँदैन भन्छ ।’
‘असती रेछ ! चट्पटाउँदै पुन् पो,’ रामे माइलाले अलि कसिलो गरी बाँधे पेटी । घाँटीको मैलो माडे लपकलपक । एक पिरी निकाले जेठी औंला र बूढी औंलाले चेपेर । फाले जेठी औंलाले फित्कौली हानेर । भने, ‘हड्डी नै गालिसकेको है अब ता ।’
‘बारोेटा छिनो खाइसको’, असारेको हाँगो छाास्दै थिए जैकुमार । त्यत्तिकै छाडे । हेरे भीरतिर । उही दमिनी भीर । अहो ! अजङ्गको लाग्यो मनमा–कसरी भत्काउने हो ? गाह«ो छ गाँठे ! हेरे ढुङ्गोलाई । फोरिसक्नुलाई उसै यमराज छ । थपे तिनले, ‘तीन दिन भइसको ज्यूँका त्यूँ ।’
‘हेम्मरले पन् फोर्न सकेन जेमराजको खप्पर !’ देउगण झ¥यो उफे्रर । रिसभरिको आँखाले हे¥यो ढुङ्गोलाई । झोंकमा आइहाल्यो । छेवैको डोकोलाई हात्तिछाप चप्पलको एक लात बजा¥यो । भन्यो, ‘ज्याद्रो पन् कस्तो त हौ !’
डोकोले दुई बल्ड्याङ खायो । ठेलाबाट माटो घोप्टाउाद्यै थिई कान्छीमाया । डोको पुग्यो कान्छीमायाकै खुट्टानेर । थरङ्ग भई । छोडिदिई ठेला । ठेला लडिझ¥यो डिलमुनी । घन्द्रङ्ग ग¥यो ठेलाले लडिझर्नुको आत्मकथा । फुत्रुक्कै उफ्रेर झरी कान्छीमाया । कुनै गोवद्र्धन पर्वत थिएन त्यो । कान्छीमायाले जुरुक्कै उचाली ठेला । राखी डिलमाथि । आई माथि । कुर्ताको फेरमा झुण्डिएका सुकेकका झ्यासहरु फाली कान्छीमायाले । मन खिन्न पारी । ढुङ्गोलाई हेरी बतासजस्तोमा । भनी, गाल्ने भो यसैले । यो पाला पन् जौँबारीले नै उछिन्ने भो ।’
‘तिनारको पुन् आँङ्दै छ राघेभीर,’भनी खुसेले । सालिम्मोसरिको माटोको डल्लो रहेछ । खुट्टैले ठेलेर अघि पर पन्छाई । कम्मरको सल कसिलो गरी बाँधी । भनी, ‘देखुङ्ला फोरेको । कमाको पैलेजस्तो ।’
‘साँच्ची, नाम्धालुङले त सुँगुरै हानेछ नि’, हरिहाङले खन्दै गरेको कोदाली राक्यो । एडिड्यास ट्राउजरको बाहिरैबाट छेपारो कन्यायो । भन्यो, ‘गिंड मात्तै अठार थो रे ।’
‘खै त हाम्रोचैं कुरा मात्तै’, रत्नाले छेपारीभन्दा अल उँभो सारी लुङ्गी । भनी, ‘कसैको ह्याउ पुग्ने होइन ।’
‘पर्सी हान्नुपर्छ कान्छी,’ देउगणले ज्याकेट फुकाएर भित्ताभरी फाल्यो । भन्यो, ह्याउ नभाको होइन ।
‘हान्न त हान्ने । माल पो कस्कोमा छ ?’ छिनोको झोला भित्तातिर सार्दै सोधे जैकुमारले ।
‘छ एक ठाउँ,’ देउगणले ढुङ्गोतिर हे¥यो । कहतारो मा¥यो । भन्यो, ‘पैले चैं यै जेमराजलाई ठेगान लाऊँ भन्दा पो ।’
‘मैले त आगै लाऊँ भनेको नि, कसैले सुन्ने होइन,’ लच्छीले स्काप फुकाली । कपाल केही असरल्ल भयो । सम्हाल्दै भनी, ‘सप्पैको आफ्नै कुरा ।
‘लु भो माइली !’ लच्छी थरङ्गै भई । हठात्मै पछि हटि । फेरि कपाल हावामा छिरोलिए । भनी लच्छील, ‘सातै खायो ।’
‘केले बाल्ने नि? कल्ले दिन्छ दाउरा ? ’ कान्छोले आँखाकै भाकामा तीर हान्यो लच्छीलाई । भन्यो, ‘तेरो जेठाजूको उतीसघारी छैन क्यारे !’
‘जे पायो त्यै नभन् है !’ लभ्छी थोरै रिसाई । हात उठाएकी थिई कान्छोलाई तर्साउन । थामी कपालमै लगेर । चुल्ठो पार्दै भनी, ‘राम्रो मुखले भने सप्पैले दिन्छ ।’
‘नापो !’ कान्छोले पत्याएन ।
‘गाउँकै विकास हुने हो । किन दिँदैन ?’ लच्छीले गोतामे कान्छालाई हेरी । भनी, ‘काकाकै बाँसघारी सुकेर पटेर भाको छ । दिनुहुन्न त काका ? राटमाटे जेठाको उस्तै छ । नन्दले पन् फाँडिलगे हुन्थ्यो, भन्थ्यो अरे ! किा दिँदैनन् ?’
‘चुप लाग है !’ भने जैसकुमारले । कान्छोको छेवैनेर उत्तानो लडिरहेको ठेलागाडालाई औंलाए । भने, ‘कान्छा, त्यो पाङ्ग्रेलाई यता लघार त !’
‘लु, भो ! नपत्याऊँ ! कान्छोले आफैलँई लोपा¥यो । ठेलालाई जैकुमारतिर अचेट्यो । भन्यो, ‘कल्ले भन्दा नन्देले । स्कुलको पैसा सक्नेले, कुलोको पैसा सक्नेले, वनको पैसा सक्नेले अब तेतिकै दिन्छ अनि डढाउलास् । यो ढुङ्गा र नन्दे उस्तै हो माइली । पगाल्नै साह्रो ।’
‘कुरा त मन खाने नै गरिस्, ’ कान्छोको कुरो मनासिबै लाग्यो लच्छीलाई । स्कापमा लागेको धुलो र पतिङ्गार टक्टकाई । भनी, ‘गाडी आए उल्लाई नि हुने हो । मागे किन दिँदैन होला र ? ’
‘खुत्तियो ! दिन्छ तेरो पोइले र ….’
‘के भनिस् रे डाँठे ?’ एकाएक छेवैको ढुङ्गो टिपी लच्छीले । …..
(राजन मुकारुङद्धारा लिखित उपन्यास ‘दमिनी भीर’ बाट साभार)